အနုပညာ Archives - Page 313 of 314 - We Love Cele
ရုရှားနိုင်ငံက ပေးအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို လူမင်း ရရှိ
ဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်က သူမရဲ့ငယ်ဘဝဟာ ပရိသတ်တွေထင်သလို မချောမွေ့ခဲ့ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
မြိတ်မြို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းလေးဝယ်ပြီး အခြေချဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ နိုင်းဝမ်း
ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် ဦးမိုးဒီ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရ
ဝေးကွာနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို KiKi Challenge နဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် စုမေ
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီး အရမ်းစကားတက်ပြီး လည်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်လေး စုမေကတော့ အခုချိန်ထိ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိမှာပါ။ကြော်ငြာများမှာသာမကပဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှာလည်း ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ် အချစ်တွေကို အခိုင်အမားရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စုမေလေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စုမေလေးရဲ့ လတ်တလောမှာ တင်ထားတဲ့ Kiki Challenge ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ငယ်ရုပ်မပျောက်ပဲ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။...
ဖိလစ်ပိုင်က နာမည်ကြီး မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဟာနယူရိ
Special Makeup Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟာနယူရီကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုအလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ ခရီးသွားဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေဆီသို့ မျှဝေလေ့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဘန်နီဖြိုးနဲ့ နှစ်ကြာမြင့်စွာ လက်တွဲခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့်လည်း သူမကတော့ သူမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Single ဘဝအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေပြီး မကြာခဏ ခရီးတွေ ထွက်တတ်လေ့ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကိုရီးယားမလေးလို ဖြူစင်အပြစ်ကင်းလွန်းလှတဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေကချစ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာနယူရိကတော့ ခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာကျော်...
ခန့်စည်သူ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်နဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့ တင်မြှောက်လိုက်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်သစ် (၄) ဦး
Kha Thone Lone - ခသုံးလုံး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကတော့ ပြည်သူချစ် ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသား ခန့်စည်သူ ၊ အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီး ထွန်းအိန္ဒြာဗို နဲ့ အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည် တို့ ပူးပေါင်း တည်ထောင်ထားတဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင် ပြီး ထွန်းတောက် လာမဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးချောလေးတွေကို...
ထိပ်ထားသခင် ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အံ့သြသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ ဘီလီလမင်းအေး
Myanmar Idol Season 2ရဲ့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ဘီလီလမင်း​အေးက​တော့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​​နေတဲ့ ကာလတစ်​​လျှောက်​က​နေ အခုအချိန်​အထိ ပရိသတ်​ရဲ့အား​ပေးမှုကို အပြည့်​အဝ ရရှိထားသူ​လေးတစ်​ဦးပါ။ ဘီလီလမင်း​အေးက​တော့ ဒီ​နေ့​လေးမှာ စိတ်​​ကောက်​တဲ့အိုက်​တင်​​လေးကို​ရော ရှက်​​နေတဲ့အိုက်​တင်​​လေးကိုပါ အရမ်းကိုချစ်​စရာ​ကောင်း​အောင်​ လုပ်​ပြခဲ့တာပါ။ ချစ်​ရိသတ်​​တွေအတွက်​ က​လေး​လေးတစ်​​ယောက်​လို ချစ်​ဖို့​ကောင်း​နေတဲ့ ဘီလီလမင်း​အေးရဲ့ ဗီဒီယို​လေးကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ဘီလီက​တော့ "အားလုံးကိုစိတ်ကောက်တယ်?? ဒါဘဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မခေါ်တော့ဘူး" ဆိုပြီး...
ရွှေထူးနဲ့ Kiss ပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုကို Instagram ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အထူးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ ရွှေရွှေစုံတွဲရဲ့အချစ်ရေးဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ Public ထိကို ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ အချစ်ရေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ရွှေစုံတွဲကတော့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ရှေ့ဆက်ချစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အတိတ်ဟောင်းက ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေထူးဘက်က ဖြေရှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်း ဝေဖန်မှုတွေက ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပေမယ့် မနေ့ညက လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ပျံ့လာတဲ့ ရွှေနှစ်ရွှေရဲ့ မုန့်ခွံ့ကျွေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ ပိုမိုအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ရွှေမှုန်ရတီဟာ သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်ကနေပြီးတော့ ရွှေထူးနဲ့ Kiss ပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူ သောင်းကျော်နေပြီး သူမတို့ရဲ့ သာယာလှပနေတဲ့ အချစ်ရေးအခြေနေကို ပရိသတ်တွေကို...
သန္တာဗိုလ်ရဲ့ Challenge ကို အကြမ်းစား ပုံစံနဲ့ အနိုင်ယူလိုက်တဲ့ သုသု
ပရိသတ်ကြီးရေ မိတ်ကပ်သုသုကတော့ အနုပညာလောကမှာရော ပရိသတ်တွေကြားမှာရော မသိသူမရှိလောက်အောင် ကျော်ကြားနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပညာမှာ ထူးချွန်သလို အများကိုရယ်မောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နေရာမှာလည်း သူမတူလောက်အောင် ဟာသတွေ ဖန်တီးတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုသုရဲ့ ပွင်လင်းတဲ့စကားပြောဟန် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ပင်ကိုယ်ဟန်တွေကြောင့် သူမက လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုသုက အမြဲလိုလို ပရိသတ်တွေ ရယ်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို facebook မှာ အပျော်သဘောနဲ့ တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။...
ပရိသတ်တွေကြား လူပြောများနေတဲ့ ချစ်သူအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ အေးငြိမ်းဖြူရဲ့ လုပ်ရပ်
ပရိသတ်​​တွေအားကျချစ်​ခင်​ကြတဲ့ ချစ်​သူစုံတွဲ​လေးဖြစ်​တဲ့ အဆို​တော့ ရဲရင့်​​အောင်​နဲ့ ​အေငြိမ်းဖြူတို့ချစ်​သူနှစ်​ဦးက​တော့ တစ်​ဦးနဲ့တစ်​ဦး အရမ်းချစ်​ကြတာမို့ ​ရှေ့သွား​နောက်​လိုက်​ညီတဲ့ နတ်​ဖက်​တဲ့စုံတွဲ​လေးလို ဖြစ်​​နေတာပါ။ သူတို့ချစ်​သူနှစ်​ဦးက​တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်​လ ၃၀ရက်​​နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ Oppo F9 ကုန်​ပစ္စည်းအသစ်​ မိတ်​ဆက်​ပွဲကို စုံတွဲတက်​​ရောက်​ခဲ့တာဖြစ်​ပြီး အားလုံးရဲ့အလယ်​မှာ ထင်​​ပေါ်​နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီပွဲ​လေးမှာ​တော့ ​အေငြိမ်းဖြူရဲ့ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အပြုအမူတစ်​ခု​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေအားလုံးက အံ့အားသင့်​ခဲ့ရတာပါ။ ​အေငြိမ်းဖြူက​တော့ နတ်​သမီးတစ်​မျှလှပတဲ့ ဝတ်​စုံ​လေးနဲ့...
မသေခင် ဒိတ်လုပ်သွားသင့်တဲ့ မြန်မာပြည်က ကချင်တိုင်းရင်းသူ မော်ဒယ် (၁၀) ဦး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင် မော်ဒယ်တွေအများကြီးရှိသလို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် မော်ဒယ်တွေလည်း များပြားစွာရှိကြပါတယ်။ ထိုသို့ များစွာ ရှိကြတဲ့ မော်ဒယ်တွေထဲမှ ကချင်ပြည်နယ်မှ မော်ဒယ် ကချင်အမျိုးသမီးများကလည်း ထင်ရှား မြောက်များစွာရှိကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှ နာမည်ကြီးအလန်းစားမော်ဒယ် ကချင်မလေး ၁၀ဦးကို ပရိသတ်ကြီးများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကချင်မလေး ၁၀ဦး အကြောင်းကို အလန်းစား ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။ နာမည်ကြီး...
Page 313 of 313 Prev 1 … 312 313